Mogadishu Journal » 2018 » March » 7
Wasiir iyo Xildhibaan Qarax lagu dilay
Mjournal :-Qarax Miino oo ka gelinkii dambe ee maanta ka dhacay degaan u dhaxeeya degmooyinka Afgooye iyo Wanlaweyn ayaa waxaa lagu dilay Wasiiru Dowlihii Amniga Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya C/qaadir C/raxmaan Cali. Wasiirka waxaa la geeryooday Axmed Cabdi Faarax...
Dowlada Jabuuti oo heshiis dhismaha dekeda Doraleh la gashay shirkad cusub
Mjournal :-Madaxda shirkada dekedda Doraleh ee dalka Jabuti ayaa heshiis lagu dhisayo dekedaas la gashay shirkad fadhigeedu yahay dalka Singapore,kadib markii dhowaan ay baabi’isay heshiis ay hore ula gashay shirkadda fadhigeedu yahay wadanka Isutagga Imaaraadka Carabta ee DP...
Weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa la soo warinayaa inuu ganaax muteysan karo kaddib falkii uu xalay ku laaday mid ka mid ah xiddigaha PSG. CR7 waxa uu xalay kaalin fiican ka ciyaaray kulankii ay kooxdiisu 2-1 uga adkaadeen PSG lugta labaad wareegga 16-ka...
Mjournal :-Orodyahanka caanka ah ee Mo Farah ee dalka Ingiriiska uga qeyb gala ciyaaraha orodada ayaa sheegay in ilaalada garoon ku yaala dalka Jarmalka ay qashqashaadeen xili uu u safrayay dalka Itoobiya. 34 jirkan oo bisha dambe ka qeyb geli doono tartan ka dhici doono...
Mjournal :-Wafdi uu hoggaaminaayo Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta gaaray degaanka Bali- doogle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana...
RW ku xigeenka oo daah furay Munaasabadda dejinta siyaasadda Qaran ee Ciyaaraha
Mjournal :-Ra’iisal wasaare ku xiggeenka dalka Mudane Mahadi Maxamed Guuleed, ayaa maanta daah-furay munaasabadda dajinta siyaasadda Qaran ee horuimarinta cayaaraha iyo dardargalinta qorsha hawleedka sanadkan 2018-da. Daahfurka dajinta siyaasada qaran ee ciyaaraha dalka oo ay soo...
Maxaabiis laga soo celiyay Libya oo la keenay Muqdisho
Mjournal :-Magaalada Muqdisho waxaa laga soo dajiyay maxaabiis laga keenay dalka Libya, kuwaasi oo ay soo daysay dowladda Federalka Soomaaliya. Maxaabiistaan ayaa tiradooda waxa ay gaareysaa illaa 13 dhalinyaro ah oo doortay in dalkooda hooyo dib loogu soo celiyo, iyadoo tiro...
Cabdi Qeybdiid “Shaqada laga rabo Wasaaradda Dastuurka waa fududeyn”
Mjoural : -Guddoomiyaha Guddiga La socodka iyo Dib u eegista Baarlamaanka Labada Aqal Cabdi Qeybdiid ayaa sheegay in howsha Wasaaradd Dastuurka uu yahay mid fududeyn ah, isla markaana Guddigooda oo ka kooban 16 xubnood shaqadooda tahay in qodobada dastuurka la eego, si wax ka...
Mo Farah oo sheegay in loo geystay tacaddi xagga isir naceybka ah
Mjournal :-Orodyahanka caanka ah ee haysta dhalashada Britain balse asalkiisu uu yahay Soomali Mo Farah ayaa booliska magaalada Munich ee dalka Jarmalka si anshax darro ah ula dhaqmay. Muuqaal video ah oo uu baraha bulshada ku faafiyay Mo Farah ayuu ku sheegay in uu yahay...
Arsenal oo aan awoodin inay buuxiso kuraasta garoonka San Serio AC Milan uga tala gashay
Kooxda Arsenal 4-kulan ee ugu dambeesay oo ay cayaartay dhamaan tartamada kala duwan waa laga badiyay kooxdana jawi kacsan ayay bartanka kaga jirta. Arsenal waxay 33-dhibcood ka hooseeyaan naadiga Man City oo horyaalka Ingiriiska hogaamineyso halka ay 25-dhibcood ka sareeyaan...
Mjournal :Taliyaha Ciidanka Mareykanka u qaabilsan Afrika ee AFRICOM General Thomas Waldhauser ayaa xubnaha Guddiga Ciidamada ee Aqalka Wakiilada uga jawaabay su’aalooyin dhowr ah oo ku saabsanaa guud ahaan Howlgalka AFRICOM ee qaaradda Afrika. Gen Thomas ayaa waxa uu sheegay...
AMISOM oo ku dhawaaqday hawlgal wado furis ah
Mjournal :-AMISOM ayaa ku dhawaaqday hawlgal cusub oo lagu furayo wadada dheer ee xiriirisa Magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, oo la rumeysan yahay in ay ku jiraan xoogag ka tirsan Ururka Al-shabaab. Gaashaanle Sare Wilson Rono ayaa sheegay in ciidamada AMISOM iyo Ciidamada...
Maxaabiis laga soo daayay Libya oo maanta laga soo dajinayo Muqdisho
Mjournal :-Saacadaha soo socda ee maanta, ayaa lagu wadaa in Magaalada Muqdisho laga soo dajiyo maxaabiis laga keenay dalka Libya, kuwaasi oo ay soo daysay dowladda Federalka Soomaaliya. Maxaabiistaan ayaa tiradooda waxa ay gaareysaa illaa 13 dhalinyaro ah oo doortay in dalkooda...